umngxunya wokudada wepellet wentengiso wokutya iintlanzi zepellet ngokwenza umatshini ngexabiso elifanelekileyo
Amandla:11kw + 0.4kw isigaba sesithathu
Umthamo:60~ 80kg / h
Intshayelelo Pellet Mill Intshayelelo
Ukujonga ukugquma kwe-pellet mill njenge-advanced screw extruder nge-drive drive kuphumelele uninzi lokuthandwa kwaye kwamkelwe ngokubanzi. Ukukhutshelwa kwezinto zokugcina ukutya kukhonza injongo yokubulala inzala kunye nokuvuthwa phantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu. Ngokubanzi kubandakanya uhlobo olomileyo kunye nohlobo olumanzi. Iipellets eziveliswa ngulo matshini ziqinile, ukungahambelani namanzi kunye nokufuma okungahambelaniyo.
Ukudada kweempawu zePellet Mill
1.Ifakwe izixhobo zokuphilisa, isixhobo esiguquliweyo esiguquliweyo kunye nesixhobo somazibuthe sokondla ngendlela efanayo kunye nokusebenza okuqinisekileyo.
2.Umdibaniso oqiqweni wokuphatha isilindle esisebenzayo uqinisekisa ukusebenza okuqinisekileyo nokukhuselekileyo.
3.Ubude be-pellets obutshintshayo benziwa ngokuguqula iintlobo ezahlukeneyo zokufa.
4.Iipelethi ezigqityiweyo zinokugcina ukuntywila 3-15 iiyure ngaphandle kongcoliseko lwamanzi.
5.Uhlobo olomileyo kunye nohlobo lomanzi lokuloba umatshini wokukhetha oyikhethileyo.Umatshini wohlobo olumanzi ufuna i-boiler ukuze enze isitya esinokuqhuba isitya sombandisi kwaye sikhuphe izixhobo eziluhlaza kwangaphambili. Iziphumo ziphezulu kunomatshini wohlobo owomileyo kwimeko yamandla afanayo. Umatshini wohlobo olumanzi ulunge ngakumbi kwimveliso enkulu.
Umgangatho wePellet Mill Umgaqo wokuSebenza
I-extrusion inokuchazwa njengenkqubo yetekhnoloji eyile, ukunyanzela ukutya okuluhlaza okokunye okanye ngaphezulu kwezi meko zilandelayo zenkqubo (njengokuxuba, Ukufudumeza, ukusika, njl.) hamba ngokufa, Yenza izinto zokwenziwa okanye ukuqhuma kwegesi. Ukwenza izithako zokutya ezivela kwilizwe elihululekileyo kwinhlama ebunjiweyo eqhubekayo, incamathelisi ephume kuyo ikhutshwa ngemingxunya kwisitya sensimbi. Ububanzi bemingxunya bucwangcisa ububanzi beepellets, ezinokuvela ukusuka kubukhulu obahlukeneyo obahlukeneyo.
Izinto zeRaw eziQhelekileyo zokwenza iZondlo zeNtlanzi eziNondlo
☆ Irayisi: ziqulathe malunga 10-14% Iprotheyini kwaye ine-vithamini B1, B2, B6 kunye nenani elincinci le-enzyme.
☆ Ikhekhe le-mustard: Hlanganisa ubuninzi 40% yekhekhe ekutyeni kwentlanzi. Kodwa musa ukusebenzisa ikhekhe elomileyo ngaphezulu kune 20%. Ikhekhe yesinaphi 30-32% iprotein. Ikwanamazinga aphezulu amanqatha.
I-Wheat Chaat: ziqulathe i-fiber, lawula iintlobo ezininzi zezifo zeentlanzi.
☆ Umbona: qukethe iprotein, I-carbohydrate, amanqatha, ivithamin A kunye no-E.
☆ Imbewu yomqhaphu: ziqulathe malunga 54% iprotein. Lizithako ezingcono kunokongezwa kwentlanzi.
☆ Amandla eentlanzi: Ukutya kukuntywila ngokulula kwintlanzi. I-Fishmeal iqulethe malunga 55-60% iprotein.
☆ Amandla Powder: iyimfuneko kakhulu ekwakheni-ithambo-ithambo. Umyinge we-calcium kunye ne-magnesium eluthulini lwethambo 2 : 1.
☆ Iiyadi : Eyona nto ifanelekileyo kwaye ifanelekile kukutya kwekatfish. Inayo 52% iprotein.
Idatha yezobuGcisa yePellet Mill
imodeli umthamo (h / h) amandla (kw) amandla okondla ( kw) usuku lokukreqaimitha ( mm) ukusika amandla ( kw)
I-VTGP200 1.5-2.0 132 1.5 φ195 3.0
Umboniso we-pellet mill